ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: အလွမ်းခရေ ကြွေလေတဲ့ နှလုံးသား
အလွမ်းခရေ ကြွေလေတဲ့ နှလုံးသား
၀ါဆို ခဲ့ပြန်ပြီ။ ဒီလို ၀ါဆိုမိုးတို့ သည်းချိန်မှာ ဒီ ခရေ လမ်းမှာ မိုးရွာထဲ သူငယ်ချင်း တွေ တရုန်းရုန်းနဲ့ ကျောင်းတက် ခဲ့ကြသည်။ ဖြူစင်တဲ့ စေတနာတွေနဲ့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် လက်တွဲ ခေါ်ယူရင်း တစ်ယောက် ကွက်လပ်ကို တစ်ယောက်က ဖြည့်ပေးရင်း ကြိုးစား တက်လှမ်း ခဲ့ကြသည်။ ဒီသူငယ်ချင်းတွေ အပါအ၀င် သူနဲ့ နှစ်ယောက်အတူ လမ်း လျှောက် ခဲ့ဖူးသည်။ မိုးရေ စိုရွှဲ နေတာ ကို မမှုဘဲ မိုးရေကြောင့် ကြွေတဲ့ ခရေ လတ်လတ် ဆတ်ဆတ် တွေကို တမ်းတမ်း မက်မက် ကောက်ခဲ့ ဖူးသည်။ ကျန်းမာရေး ချူချာသူ ကိုယ့်ကို စိုးရိမ် တကြီး ဗျစ်တောက် ဗျစ်တောက် ဆူရင်း ထီးလိုက် မိုးပေးရင်း ရွှဲရွှဲစို ကုန်သော ကိုယ်တို့ နှစ်ယောက်ကို သူငယ်ချင်းတွေ ၀ိုင်းစ, တော့ ရှက်ရမ်း ရမ်းပြီး သူ့ပုခုံးကို စာအုပ်နဲ့ ရိုက်ဖူး သည်။ ပြီးတော့ ရှက်မွှန် မွှန်ပြီး ကားလမ်းကို ကယောင် ကတမ်း ဖြတ်ကူးတော့ ကားတိုက်မိ မလို ဖြစ်လို့ သူက ကမန်းကတန်း ပြေးလာပြီး လှမ်းအဆွဲမှာ ….
(((ကျွီ…..))) ဟေ့ .. အဲလောက်တောင် မိုးမမြင် ကားမမြင် လမ်းပေါ်တက်ကဲ နေရလား.. ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ တော်တော် သေချင်နေလား .. မင်းတို့ သေချင်လဲ ငါ အမှုပတ် မခံနိုင်ဘူး.. လမ်းဘေး ဆင်းလျှောက်…
ကြောက်မက်ဖွယ် ကား အရှိန်သတ်သံနဲ့ အတူ ဟိန်းဟောက် ငေါက်ငမ်းသံ တို့ကြောင့် လန့် ပြီး ဖျတ်ခနဲ လှည့်ကြည့်ခိုက် မီးဝင်းဝင်း တောက်သော မျက်လုံး အစုံနဲ့ ကားမောင်းသူက ကားကို ဒေါသတကြီး ကွေ့မောင်း သွားခဲ့ပြီ။
နင်ကလဲ !! ဘာလို့ လာဆွဲတာလဲ.. ဟိုမှာ ငါတို့ကို ရစရာ မကျန်အောင် အော်ငေါက်သွားပြီ
ဟဲ့.. နင့်ကို ကားတိုက်မိမှာ စိုးလို့ ပေါ့ဟဲ့
နင့်ကိုပါ တိုက်မိမှာကျ မစိုးရိမ်ဘူးလား
ဟေ့အေး.. နင့်ကို တိုက်မိမှာ စိုးလို့ မျက်စိပြာထွက် သွားပြီး ဘာလုပ် လိုက်မိ မှန်းတောင် သတိ မထားလိုက် မိဘူး
ရှက်တာရော လန့်တာပါ ပေါင်းပြီး ရင်ခုန် မောဟိုက် လွန်းလို့ သွေးရှိန် တက်ပြီး နီရဲ နေတဲ့ ကိုယ့်မျက်နှာကို ကရုဏာ သက်စွာ ကြည့် ရင်း ကားငှားပြီး အိမ်အရောက် လိုက်ပို့ ပေးခဲ့တဲ့ သူ… ဒီလို ကားတိုက် မိမှာ စိုးလို့ ဖျတ်ခနဲ လှမ်းဆွဲတဲ့ လက်ဖ၀ါး အတွေ့ နွေးနွေးလေးက တစ်သက်မှာ နှစ်ကြိမ်ထဲ ဆိုပေမယ့် နှလုံးသား ထဲထိ စီးဝင် သွားခဲ့ တယ် မောင်။
ဖြူဖြူစင်စင် နေခဲ့မိတာ အမှားလားမောင်။ မောင့်ဘ၀ လုံခြုံ ပျော်ရွှင်နေမှ ပျော်နိုင်မှာမို့ ဒီလို အခြေအနေနဲ့ နီးစပ်အောင် ဖန်တီးခွင့်တွေနဲ့တောင် အလှမ်းဝေး လွန်းလှလို့ ဖြူစင်တဲ့ သူငယ်ချင်း ဆိုတဲ့ အခြေအနေ လေးတွေကို အနိုင်နိုင် ထိန်းထား ခဲ့ရင်း နီးစပ်ခွင့် လေးတွေကို ရှာကြည့် ခဲ့ပါသေးရဲ့။ ဒါပေမယ့် မောင်ရယ်… အကုသိုလ် ဆိုတာ ၀င်ရင် အပေါင်း အဖော်နဲ့ ၀င်တတ်တယ် ဆိုသည့် အတိုင်း နောက်ဆုံး အနေနဲ့ နှုတ်ဆက်ခွင့် လေးပင် မရခဲ့။ မောင့် အနား မှာလဲ ဆူးမဲ့ တော်ဝင် ပန်းလေး တွေက အစီအရီပါ။ ကန္တာရ ဆူးပင် တစ်ပင် ကနေ ဘယ်အချိန် ဘယ်လို ပွင့်နိုင် မယ်မှန်း မသေချာ နိုင်တဲ့ အခွင့် တစ်ခုကို တော်ဝင်ပန်းနဲ့ မလဲချင် ပါနဲ့ မောင်ရယ်။ မလဲစေချင်ပါဘူး။ နှလုံးသားမှာ မောင်က အပြည့် နေရာ ယူပြီးခါမှ ချစ်မိမှန်း ရိပ်မိ သိရှိ ခဲ့ရတဲ့ နောက်ကျမှု အတွက် ဘယ်လွမ်းကျန် နေချင်ပါ့ မလဲ မောင်ရယ်။ ဒါပေမယ့်လေ.. ကိုယ့်နှလုံးသား စိတ်အဆာ ပြေဖို့ မောင့်ဘ၀ကို ကိုယ့်နားမှာ အဆင်းရဲ ခံပြီး ခေါ်မထား ရက်ဘူးမောင်။ မောင့်ရဲ့ ဖြူစင် အပြစ်ကင်းတဲ့ နှလုံးသားကိုလဲ ဘယ်နည်းနဲ့မှ မနာကျင် စေရက်ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် မခိုင့်တခိုင်ကို အတင်း ဖြတ်ချရင်း မောင်နဲ့ ဝေးရာဆီ ပြေးထွက် ဖို့ ကြိုးစား ခဲ့ရသည်။ ရုန်းထွက်ရာ လမ်းမှာ မိုးစက်တွေ နဲ့အတူ ခရေ တွေ တဖွဲဖွဲ ကြွေနေတယ်မောင်…
ကံကြမ္မာ မုန်တိုင်း တစ်ခုကို မောင့်ဆီ သယ်ဆောင် မလာရက်ဘူး မောင်… နှလုံးသား သစ်ပင် က အချစ်ပန်းတို့ မဝေခင် တည်းက ရာသီကျော် စဉ်းစား ချင့်ချိန်မှု ဦးနှောက်က ပူပင် သောက တွေကြောင့် အလွမ်းတွေ အရင် ကြွေခဲ့ ပြီကော… ကျူရှင် break ပေးချိန်မှာ ထုံးစံ အတိုင်း စကားတွေ ပေါက်ပေါက်ဖောက်ရင်း သီချင်းဆိုရင်းနဲ့ အရင်နေ့ညက မြ၀တီ ရုပ်သံက ပြသ ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ဆွေးနွေး ငြင်းခုန် သလိုလိုနဲ့ မင်းသားကို အဆက်ဖြတ်တဲ့ မင်းသမီး ကိုယ် စား ရှေ့နေ လိုက်ပေး ခဲ့ရင်း မောင့်အတွက် စကား တခွန်း ချန်ဖြစ် ခဲ့သည်။
မင်းသမီးက မင်းသားကို ဖြတ်ပစ်ခဲ့တာ အချစ်တစ်ခု အတွက်နဲ့ ဘ၀ကို မဖျက်စေချင်လို့ ပါဟာ..
ဒါပေမယ့် အဲဒီ အချစ်တစ်ခု မရှိရင်ကို ဘ၀က အဓိပ္ပာယ် နဲ့ အနှစ်သာရ မရှိတော့ဘဲ ခြောက်ခမ်း သေဆုံး ခဲ့သလို ဖြစ်တတ်တယ်ဟ
ဖြစ်တတ်တာ ဖြစ်မှာပါ.. ဖြစ်ကို ဖြစ်ရမယ် ရယ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး မို့လား။ နောက်ပြီး အချစ်ဆိုတာ ပြန်လည် ရှင်သန် နိုင်သလို ထပ်ပြီးလဲ မွေးဖွား နိုင်စွမ်း ရှိတတ်ကြတယ် မို့လား
လင်းလက် နေတဲ့ သူ့မျက်ဝန်း ရုတ်တရက် မှိုင်းမှုန် သွားခဲ့သည်။ ပြီးတော့ အဝေးကို ငေးရင်း တွေးရင်းမှ သူ့ကို လိုက်လျောသလို သဘော တူသလိုလိုနဲ့ မသေမချာ စကားတခွန်း ပြန်ခဲ့သည်။
အင်းးး ဟုတ်ချင် ဟုတ်မှာပေါ့ တဲ့..
ဇာတ်ကားတွေကလဲဟာ ဒီအချစ် အကြောင်းချည့် ရိုက်ပြ နေလိုက်တာ… အချစ်စစ် ဆိုတာ ဘာလဲ။ ပေးဆပ်ခြင်းလား ရယူခြင်းလား။ စွန့်လွှတ်ခြင်းလား။ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းလား။ အချစ်ကို ရအောင် ယူနိုင်သူက နိုင်သူလား။ ဒါဆို ချစ်မိသွားတဲ့ မိန်းကလေးက အရှုံးပေး ပါတယ် ဆိုတော့ ဘာကို ရှုံးသွားတာလဲ…
အဲဒါတွေကြောင့် ငါက မြန်မာကားတွေကို မကြိုက်တာ ပေါ့ဟ.. ချစ်တယ် ဆိုတာ အပေးအယူ လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ အရောင်း အ၀ယ် လုပ်နေတာလဲ မဟုတ်ဘူး။ အလဲ အလှယ် လုပ်နေ တာလဲ မဟုတ်ဘူး။ အနိုင်အရှုံး သတ်မှတ် ရအောင် ပြိုင်ပွဲ လုပ်နေ တာလဲ မဟုတ်ဘူးလေ။ ငါကတော့ ချစ်တယ် ဆိုတာဟာ ငါချစ်တဲ့ မိန်းကလေး စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင် ကျေနပ် နေတာ ကို ငါ တစိမ့်စိမ့် ကြည့်ရင်း ပျော်နေတာ.. ငါချစ်တဲ့ မိန်းကလေး အဲလို ဖြစ်နေအောင် ငါက ဖြည့်ဆည်း ပေးနေရတာကို ကျေနပ်နေတာ ဒါဟာ ငါ့အချစ်ပဲ..
အော် ဒါဆို နင်က အချစ်ကို ပေးဆပ်ခြင်းလို့ ယူဆ တာပေါ့ ဟုတ်လား
ဟုတ်ဘူး.. ငါက အဲလို နေရတာကို ပေးဆပ် နေရ ပါလား လို့ကို မမြင်တာ.. ငါ့စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်မှုတွေ ငါရ နေတယ်လေ…
သူ့စကားတွေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နှုတ်ဖျား မှာသာ မက မျက်ဝန်း မှာပါ လက်ဖြာ လာလေပြီ။ ပြုံးရီ လဲ့စို နေတဲ့ သူ့မျက်ဝန်း များကြောင့် ကိုယ် တားဆီး နိုင်ခြင်းငှာ မစွမ်းသော အခြေအနေ သို့ မရောက်မီ အမြန် စကားစ ဖြတ်ရ တော့မည်မို့
ဒါဆို ဒသနတွေ ကျွမ်းနေပုံ ထောက်ရင် နင် တစ်ယောက် ယောက်ကို ချစ်ဖူးပြီးသား ထင် တယ်။ နင့်ကောင်မလေး ကံကောင်းတာ ပဲပေါ့။ ငါတို့နဲ့ မိတ်ဆက် ပေးဖို့ တရက်ရက် ခေါ်လာ ခဲ့လေ…
ကွက်ခနဲ ပျက်သွားသော မျက်နှာ၊ တင်းခနဲ စေ့သွားသော နှုတ်ခမ်း၊ မသိ မသာလေး တွန့်ချိုး သွားသော မျက်မှောင် တို့နဲ့ အတူ ဖွဖွလေး ချလိုက်သော သက်ပြင်းတို့က တကယ့်ကို ငြင်ငြင် သာသာ လေး ရယ်ပါ။
မင်္ဂလာဆောင်မှပဲ ကြည့်တော့ဟာ.. နင်တို့ စနောက် နေရင် ငါ့ကောင်မလေး ရှက်နေရ ဦးမယ်
(((အောင်မယ်လေးဟဲ့.. အဖြစ်သည်း နေလိုက်တာ)))
သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ အခြေအနေကို အကဲခတ် စောင့်ကြည့် နေသော သူငယ်ချင်းတွေ ပြိုင်တူ ၀ိုင်းအော်ရင်း တစ်ယောက် တစ်ပေါက် ကျိန်ဆဲ ကြတော့ သူက ရယ်ဟဟနဲ့။
စာရူး ကဗျာရူးလေးများ ပီပီ ကဗျာစာအုပ် စုထုတ်ဖို့ စိတ်ကူးယဉ် ကြချိန်။ တစ်ယောက် ၂ပုဒ်နှုံး ကဗျာစုဖို့ တောင်းဆိုကြတာမို့ စာအုပ်ဟောင်းလေးထဲက ကဗျာဟောင်းတွေကို ကောင်းနိုးရာရာ ပြန်ရွေးနေချိန်…
ဟိတ် .. ဘာကဗျာတွေ ရှ်ိလဲ ပြဦးလေ
အာာာ ပြဘူး။ ရွေးပြီးရင် ကြည့်ပေါ့..
မပြလဲ နေပေါ့ .. ငါတို့က နင် ကျောင်းလခ သွင်းနေတုန်း နင့်လွယ်အိတ်ထဲက ခါးပိုက်နှိုက် လုပ်ထားပြီး ခိုးဖတ်ပြီးပေါ့။ တစ်ပုဒ် ရွေးပြီးပြီ ဒါပဲ…
ဟမ်.. အစုတ်ပလုတ်တွေ အဲလို လုပ်စရာလား.. စိတ်ပုတ် လိုက်ကြတာ ဘယ် တစ်ပုဒ်တုန်း
(((အိပ်မက် ချစ်သူ တဲ့)))
ပြုံးပြုံးကြီး လှမ်းပြောတဲ့ သူတို့ကို သေချာ မကြည့်ရဲဘဲ လှမ်းပေးလာတဲ့ စာအုပ်ကို လွယ်အိတ်ထဲ ကမန်းကတန်း ထိုးထည့်ရင်း ပြေးထွက် ခဲ့တော့ ကရော်ကရော် အော်ရင်း နောက်ပြောင်သံတွေ နောက်နားဆီမှာ ဝေးလို့ ကျန်ခဲ့ပြီ။ ရင်မောရပါလား မောင်ရယ်…
ဘ၀ တကွေ့ တွေ့မယ့် ပြသနာ
မေတ္တာ သံလျှက်၊ သစ္စာ ဦးသျှောင်
ပိုင်စိုးမှု ဧကရာဇ် တစ်ဆူ
ဒါပေမယ့်လဲလေ.. သူသိရဲ့လား အိပ်မက်ချစ်သူရေ
ဂုဏ်၊ အာဏာ၊ ငွေ အမိုး လက်နက်နဲ့
လုယက်ချင်ကြတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ထူပြော နေလေရဲ့
လုံခြုံအောင် မကာကွယ် နိုင်သေးခင်တော့
ဘယ်လို အခြေအနေနဲ့မှ အစွန်းထင်း မခံနိုင်တာမို့
Yes or No မပြောရက်
အိပ်မက်ထဲက မထွက်ခဲ့ပါနဲ့ကွယ်။ ။
ဒီလိုနဲ့ သီတင်းကျွတ်တော့ ကျောင်းတွေလဲ ပြီးခဲ့ပြီ။ လုပ်ငန်းခွင် ၀င်ပြန်တော့ အချင်းချင်း လဲ မြင်တွေ့ရချိန် နည်းလာခဲ့သည်။ တယ်လီဖုန်း များတော့ အဆက်အသွယ် မပြတ် ကြ။ သို့သော် ကံကြမ္မာ မုန်တိုင်းက ရိုင်းသထက် ရိုင်းလာခဲ့ပြီ။
ကိုယ်နဲ့ အတူ ရှိနေရင် ကြုံတွေ့ရမယ့် ဒုက္ခ တွေကြောင့် နာကျင် ခက်ခဲစွာ ခံစား နေရ မှာကို မကြည့်ရက် မမြင် ရက်လို့ ဝေးနေရင် မီးဝေး ချိတ်မာ ဆိုသလို ခံစားချက် သက်သာ ပါစေ တော့ ရယ်လို့ ပြေးထွက် ခဲ့တာပါ မောင်။ ဘ၀မှာ နွေးထွေး လုံခြုံစွာနဲ့ အချစ်ခံရသူ မောင့် အတွက် ကိုယ့်အချစ် မရှိလဲ မိသားစု ပတ်ဝန်းကျင်က ပေးတဲ့ အချစ်နဲ့ လုံလောက် နေမှာပဲ လို့ တွက်ဆ၊ အချိန်နဲ့ ကြင်နာ ယုယမှု မပေး နိုင်တဲ့ ကိုယ့်အချစ် သေးသေးလေးကို မရရုံနဲ့ ဘာမှ မဖြစ် လောက်ဘူးလို့ ထင်ခဲ့မိ တာလဲ ပါပါတယ်မောင်… ဝေးလေလေ ဆွေးမပြေ ဖြစ်ရ မယ်မှန်း သိရင် စတည်းက ဒီလမ်းကို မမြန်း ခဲ့ဘူးမောင်… ဆုံးဖြတ်ချက် မှားမှန်း သိတဲ့ အချိန်မှာ လွမ်းနောင်တ တို့က အထိတ်တလန့် သတိပေး ချိန်မှာ ပြန်ပြင်ဖို့ အချိန်နှောင်း ခဲ့ပြီလေ..
ဘ၀မှာ ကံကြမ္မာ မုန်တိုင်းတို့ ဘယ်လောက် ရိုင်းရိုင်း ကိုယ့်ကို အမြဲ ကာကွယ် ပေးတတ်တဲ့ အားပေးတတ်တဲ့ မောင့်ကို အိပ်မက်ထဲမှာ မြင်လိုက် ရရုံနဲ့ အရာရာကို တစ်ယောက်တည်း ရင်ဆိုင် ရဲလောက်အောင် ဘ၀တစ်ခုလုံး ပြီးပြည့်စုံ အားရှိ သွားတယ် ဆိုရင် ပိုတယ်လို့ ဆိုမှာလားမောင်.. အဲလိုတော့ မပြောပါနဲ့ လောကကြီးရယ်.. ဒီလို ကံကြမ္မာ မုန်တိုင်းတို့ ရိုင်းလေတိုင်း အနားမှာ မောင် မရှိတာ တော်ပါသေးရဲ့.. မဟုတ်ရင် မောင်ပါ ခံစားနေရမှာ ဆိုတဲ့ အတွေးကြောင့် စိတ်သက်သာ ရာရ တတ်လို့ပါ။
ဒါပေမယ့် လဲလေ… မလွမ်းပါနဲ့ လို့ မတားရက် ခဲ့တာ မောင် ပိုလွမ်းမှာ စိုးလို့ပါ။ ၀ါဆို မိုးတို့ ဖြိုင်ဖြိုင် ရွာပြီ ဆိုရင် သစ်စေ့ လေးတွေ ကနေ သစ်ပင်ပေါက် လေးတွေ အပြိုင်းအရိုင်း ထွက်ပေါ် လာသလို အချစ် သစ်စေ့ လေးတွေ ကနေပြီး အလွမ်း ခွန်အားတို့ ရှင်သန် နိုးထလို့ သတိရခြင်း အပင်သစ် လေးတွေ အပြိုင်း အရိုင်း ထွက်ပြူလို့… နှစ်ယောက် အတူ လျှောက် ဖူးတဲ့ လမ်းမဟုတ် ပေမယ့် ခရေပင်တွေ စီတန်း ပေါက်ရောက် နေတဲ့ လမ်းတွေ ဆီကို မိုးရွာချိန် တွေမှာ ရောက်တိုင်း … မိုးကြောင့် ကြွေတဲ့ ခရေဖြူ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် တွေကို ငေးရင်း အလွမ်းခရေ တို့ကလဲ နှလုံးသား သစ်ပင် ထက်က တဖြုတ်ဖြုတ် ကြွေလို့… ခရေ ပင်ရိပ်မှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ခရေတွေနဲ့ အတူ အသည်းတို့ အခါခါကြွေ….
မောင် လွမ်းကျန် ခဲ့တယ် ထင်တယ် ဆိုတဲ့ စကားတွေကို အတ္တ မကုန်သေးသူ ပီပီ ရင်ခုန် ကျေနပ်စွာ နားထောင် နေမိပေမယ့် အလွမ်း ဒဏ်ရာကို မောင် မခံစား ရစေချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေက ဒီရေလှိုင်းလို တလိမ့်လိမ့် တက်လာ ပြန်သည်။ အချစ်ကို ကိုးကွယ်ရင်း နှလုံးသား ကို မနာကျင် စေချင်ဘူးမောင်… လက်ရှိ အခြေအနေကြောင့် မေ့လို့ မရဘူး ဆိုရင်လဲ အပြစ် မြင်စရာ အမှား တွေကို မြင်လို့ မုန်းလိုက် ပါတော့မောင်. ခံစားချက် မဲ့တဲ့ အတ္တကြီးလွန်းပြီး မေတ္တာ တရား ခေါင်းပါး လွန်းတဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက် အဖြစ် အပြစ် မြင်လို့ မုန်းမေ့ လိုက် ပါတော့… မုန်းမေ့မှ မောင် ခံစားရ သက်သာ မှာမို့ မောင်မုန်းအောင် တမင် လုပ်ရက် ခဲ့တဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက်ကို မောင် မလွမ်း ပါစေနဲ့ လို့ပဲ ဆုတောင်း နေမိတယ် မောင်…
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 11:03 PM
ချစ်လျက်နဲ့ များ ဘာကြောင့်ချန်ထားပစ်ခဲ့တာလဲကွယ်…